Godina Qellem walaggaa jiraattonni aanaa Gaawoo Qeebbee dhukaasa hamaa magaalaa keessaa fi naannoo sanatti dhaga’amuun hanga mgaalaa Qeebbeetti galamee gaaga’ama guddaatu nu irra ga’aa jira jechuu dhaan Raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Dhukaasi kun manaaf nama adda utuu hin basin meeshaa gurguddaan dhuka’aa jira, kanaaf namni magaalaa keessaa baqachuuf dirqame jedhu.
Qabeenyaan barbadaa’uu isaa kan dubbatan jiraattonni magaalaa Qeebbee humni raayyaa ittisa biyyaa nutti bobba’ee ol galuu fi gad ba’uu nu dhorke jechuun himatan. Bulchaan aanaa Gaawoo Qeebbee obbo Gammachuu Gurmeessaas dhukaasi magaalattii keessatti dhaga’amaa kan ture ta’uu isaa mirkaneessaniiru.
Godina Lixa Wallaggaa aanaa Najjoo keessatti immoo kaleessa galgala namoonni lama itti dhukaafamuun ajjeefamuu jiraattonni naannoo nuuf himaniiru. Reeffi namoota du’an lamaanii hospitaala Najjootti geessamee du’uun isaanii mirkanaa’ee maatiif kennamuu namoonni kunis itti dhukaafamuun kan ajjeefaman ta’uu ibsi Hospitaalicha irraa kenname beeksisee jira.
Itoophiyaan Malaammaltummaa fi Dhiittaa Mirga Namaan Wal Qabatee Angawoota 63 To’annaa Jala Oolchite
Hooggantoonni Itoophiyaa,Eertiraa fi Somaaliyaa Gaanfa Afrikaatti nagaa fi tasgabbii buusuu fi waliin hojjechuuf walii galan